Goalong मिश्रित व्हिस्की स्वाद मदिरा व्हिस्की रक्सी 700ml 40% abv, चाइना Goalong मिश्रित व्हिस्की स्वाद मदिरा व्हिस्की रक्सी 700ml 40% abv निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना - Goalong रक्सी (समूह)
Goalong मिश्रित व्हिस्की स्वाद मदिरा व्हिस्की रक्सी 700ml 40% abv
ब्रान्ड नाम: रोयल कार्लस्टन
प्याकेजिङ्ग विवरण: Bott bott बोतलहरू / डिब्बाहरू
Goalong मिश्रित व्हिस्की स्वाद रक्सी व्हिस्की रक्सी
40% VOL र 23% VOL 700ML
1. रंग: हल्का मह सुनौलो
2. गन्ध: हल्का ओक ब्यारेल सुगन्धको साथ नरम गहुँको सुगन्ध
3. स्वाद: कोमल र अद्वितीय स्वाद संग चिकनी
4. प्रतिस्पर्धी मूल्य संग पर्याप्त स्टक
गोलong ह्विस्की बनाउने प्रक्रिया भुइँ माल्टलाई विशेष काठमा राख्नु हो ब्यारेल, उबलते पानी जोड्नुहोस् र हलचल। गहुँको पीठो द्रुत गतिमा उमालेको पानीमा घुलेको छ चिनी रिलिज, र त्यसपछि किण्वन चरण प्रवेश। खमीर थपिएको दुई दिन पछि, wort 8 डिग्री गर्न किण्वित हुनेछ। किण्वन पछि, यो आसवन चरण प्रविष्ट हुनेछ। त्यस पछि दोस्रो आसवन, हाम्रो व्हिस्की रक्सीको बहु-स्तरित स्वाद हुनेछ। नरम गहुँको गन्धको साथ र हल्का ओक काठ सुगन्ध।
Goalong समूहले व्हिस्की, ब्रान्डी, भोड्का, जिन, क्राफ्ट बियर, प्राकृतिक चामल बाइजिउ, प्याकेज गरिएको पेय पानी, कार्यात्मक पेय पदार्थ र बहुविध पेय पदार्थहरूको उत्पादन, अनुसन्धान र विकास र बिक्रीमा केन्द्रित छ। पूर्ण रूपमा स्वचालित बोतलिङ लाइन र आधुनिक उत्पादन कार्यशाला, Goalong समूहले प्रत्येक दिन 10000 स्वचालित उत्पादन बोतलिंग लाइनहरू 8 केस उत्पादनहरू उत्पादन गर्न सक्छ।
गोलङ समूहले पीकडाईका साथ र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली, ISO र HACCP प्रमाणीकरणको साथ rofessional अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर व्यवस्थापन टोली। विश्वास गुणस्तर संग सुरु हुन्छ।
बोतल मेशिनले उच्च सेतो बोतल बनायो
लेबल चाँदी एल्युमिनियम पन्नी
ढक्कन एल्युमिनियम टोपी
रंग हल्का महको रंग
धेरै क्षेत्रबाट ग्राहकहरू यसको स्थिर स्वाद र गुणवत्ता जस्तै। तपाईं रातमा यो व्हिस्की पाउन सक्नुहुन्छबारहरू, समारोहहरू, पार्टीहरू र अन्य धेरै अवसरहरू। क्लासिक हुनु भनेको सधैं सरल हुनु हो। माएक परिवर्तित संसार, यो सरल र सार्थक छ तपाईंको मुटु पछ्याउन र साहसीसाथ तपाईंको लागि जानुहोस्सपनाहरु